Itoophiyaan Raayyaa Woraana biyyattii 3000 oli Somaaliyaatti bobbaaste - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Itoophiyaan Raayyaa Woraana biyyattii 3000 oli Somaaliyaatti bobbaaste
Itoophiyaan Raayyaa Woraana biyyattii 3000 oli Somaaliyaatti bobbaaste
Humna ittisa Itoophiyaa Somaaliyaa keessatti
Raayyaan Humna Ittisa Itoophiyaa 3000 olitti laakkayamu daangaa ce’ee Somaaliyaa seeneera, akka gabaasa VOAtti. Humni kuni garasitti kan ce’e Wixata dabree eegaleeti. Woraana biyyattii garasitti bobbaasun kan barbaachiseef, akka taajjabdootaatti, garee al-Shabaab irratti tankaarfii fudhachuudhaf.
Akka jiraattonni naannoo Geedoo dubbatanitti raayyaan humna ittisa Itoophiyaa taankiifi meeshaalee woraanaa gurguddaa kan qabuudha. Woraana Itoophiyaa magaalaa Luuq keessa socho’aa jiraachuu isaanii namoonni ijaan argan dubbataniiru. Taajjabdoonni kan jedhan fuulleen woraana Itoophiyaa gara magaalaa Bandereetti. Magaalaan tuni maandhee garee al-Shabaab ta’uu isiiti kan himamu.
Itoophiyaan garee Mootummaa Islaamaa ‘Islamic Court’ angoo irraa ari’uuf humna ittisa isii bara 2006 Somaaliyaa seensistee turte. Sana boodas Itoophiyaan yeroo yerotti humna isii garasitti bobbaasa turuun niyaadatama. Bobbaa haarawaan wolqabatee ibsi mootummaa Itoophiyaa irraa kenname hanga ammaatti hinjiru.
Worri bobbaafi imaammata Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf xiinxalan, Itoophiyaan poolisii naannoo Gaanfa Aafrikaa fakkaataa dhufteerti jedhu.
garee al shabaab
raayyaa woraana itoophiyaa
Previous articleItoophiyaa keessatti gatiin meeshaalee bara kana %10.4 dabale
Next articleWoldorgommii atleetiksii Siwiizerlaanditti ta’een Yoomiif Qajeelchaa 2ffaa ta’uun xumure; Siifan Hasan moo’atteerti